Ny iray amin'ireo mpanjifanay dia nitady siny HDPE hatrany am-piandohana dia nitady tavoahangy D75mm * H122mm HDPE ny mpanjifanay miaraka amina fehiloha voaporofo.
Mampalahelo fa tsy manana an'io habe io izahay amin'ny HDPE. Na izany aza, manana habe silimar be dia be izahay amin'ny PET jar F-450B. Avy eo, nanoro hevitra ny mpanjifako izahay mba hampiasa jar jar PET amin'ny loko fotsy. Farany, eken'ny mpanjifanay izany, izahay nanao ny fifanarahana ary nametraka fifandraisana matanjaka kokoa aminay.